शिव पूजामा भस्म लगाउने महत्व - सनातन संस्था
सनातन संस्था > Latest Articles > हिन्दू धर्म > शिव पूजामा भस्म लगाउने महत्व
शिव पूजामा भस्म लगाउने महत्व
१. शिव पूजा गर्नु अधि शिव भक्तले आफ्नो पूजापूर्व सिद्धता गर्न आवश्यक छ ।
यज्ञमा अर्पित समिधा एवं घ्यूको आहुति जलिसकेपछि शेष बचेको पवित्र रक्षालाई ‘भस्म’ भनिन्छ । भस्मको विभूति एवं राख, यी नामहरुले पनि जानिन्छ । देवीलाई कुमकुमार्चन, श्री गणेशलाई दूर्वार्चन गर्दछ, यसप्रकार भगवान शिवलाई भस्मार्चन गरिन्छ । भस्मार्चन अर्थात शिवजीको नामजप गर्दै या शिवजीको एक-एक नाम उच्चारण गर्दै शिवपण्डिमा भस्म अर्पण गर्ने । भस्मार्चन पछि शिवतत्त्वले भारित भस्म उपयोगमा ल्याउदछ । शिव पूजामा भस्मधारणको महत्त्व छ । भस्मधारण नगरि शिवपूजा आरम्भ गर्दैन ।
२. भस्मको रूपमा के को प्रयोग हुन्छ ?
भस्मधारण हेतु गोमय द्रव्य (गोबर) अग्निमा हालेर सिद्ध गरिएको भस्म सन्तद्वारा गरिएको यज्ञबाट प्राप्त भस्म अग्निहोत्रि ब्राह्मणको अग्निकुण्डको भस्म प्राचीन यज्ञस्थलको माटो कर्नाटक राज्यको गाणगापुरमा स्थित भस्मपर्वतको भस्म एवं चिताभस्म अर्थात मृतलाई मन्त्राग्नि दिएर दाहसंस्कारबाट निर्मित रक्षा यसका प्रयोग गर्दछन् । शिवजीलाई चिताभस्म अधिक प्रिय हुन्छ; तर सर्वसामान्य व्यक्तिलाई चिताभस्म सहन हुँदैन । त्यसैले गाईको गोबरबाट उपयोग गरि बनाएको भस्म नै अधिकतर उपयोग गरिन्छ ।
३. भस्मनिर्माणको विधि
भस्म बनाउनको लागि लोकल गाईको गोबर धर्तीमा झर्नु भन्दा पहिला नै जम्मा गरिन्छ । जुन स्थानमा भस्म बनाउने हो, त्यो स्थानलाई गोबरले लीपछ । गोमूत्र अथवा विभूतिको जल छर्किएर स्थान शुद्ध गर्दछ एवं त्यो स्थानको चारैतर्फ रंगोली बनाउँछ । तदुपरांत त्यस स्थानमा कुनै फराकिलो पात्रमा गुइठा (dry cowdunk cake) राख्छ । त्यसमा लोकल गाईको घ्यू राख्छ, कर्पूर राख्छ । कुलदेवता, इष्टदेवता एवं गुरुलाई प्रार्थना गरि तत्पश्चात गुइठामा राखेको कर्पूर प्रज्वलित गर्दछ । विधि पूर्ण हुने बेलासम्म कुलदेवता अथवा इष्टदेवताको नामजप गरिन्छ । भस्म तयार भएपछि त्यसलाई एउटा भाडामा भरिन्छ । त्यस पात्रलाई दाहिने हातले स्पर्श गरि भावपूर्ण रूपमा दस पटक ‘ॐ नमः शिवाय ।’ नामजप गर्दछ । यस्तो गर्नाले भस्म अभिमन्त्रित हुन्छ । भस्म अभिमन्त्रित गर्नुको अर्थ हो, भस्ममा देवताको चैतन्य ल्याउनु । अभिमन्त्रित भस्मको उपयोग अधिक लाभदायक सिद्ध हुन्छ ।
४. भस्मधारणको विधि
५. भस्मधारणबाट हुने सूक्ष्म-परिणाम
यो सूक्ष्म-चित्र हेरेर शिवपूजन गर्नु भन्दा पूर्व भस्मधारण गर्नुको महत्त्व तपाईलाई स्पष्ट भयो होला ।
६.भगवान शिवको पूजाको पूर्वतैयारीमा भस्मधारणपछि आउँछ, रुद्राक्षधारण
शिवपूजन गर्ने समय घाँटीमा रुद्राक्षको माला अवश्य धारण गर्नुहोस् । रुद्राक्ष सुन, चाँदी, तामा अथवा ऊनको धागोमा उनेर धारण गर्दछ । कुनै पनि देवताको जप गर्नको लागि रुद्राक्षमालाको प्रयोग गरिन्छ । रुद्राक्षमालालाई घाँटीमा अथवा शरीरमा अन्यत्र धारण गरेर जप गर्दा, बिना रुद्राक्षमाला गरेको जप भन्दा हजार गुना अधिक लाभदायक हुन्छ । यस प्रकार अन्य कुनै मालाले जप गर्नुको तुलनामा रुद्राक्षको मालाले जप गर्दा दशहजार गुना अधिक लाभ हुन्छ ।
७. शिवालयमा पूजाको लागि कहाँ बस्ने ?
सामान्यतः शिवमन्दिरमा पूजा एवं साधना गर्ने श्रद्धालुगणहरु प्रत्यक्ष रुपमा शिवजीको तरङ्गहरु आफ्नो शरीरमा लिदैन्न् । किनकि ती तरङ्गहरुलाई सहन सक्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन र त्यसले हामीलाई कष्ट हुन सक्छ । विष्णुरूपको मन्दिरमा देवताको मूर्तिको अगाडि कछुवा हुन्छ । कछुवा र देवताको मूर्तिको मध्यमा कोहि बस्दैन्न् । यस प्रकार शिवजीको मन्दिरमा अर्घको स्रोतको ठीक सिधा अगाडि बस्नुको सट्टा आकृतिमा देखाए अनुसार एक तर्फ बस्नुहोस् । किनकि भगवान शिवको तरङ्गहरु अगाडिबाट निस्कदैन, तिनीहरु अर्घाको स्रोतबाट बाहिर आउँदछन् । १ देखि ७ – यहाँ बसेर साधक पूजा गर्न सक्छ । ८ – यहाँ कोहि नबस्नुहोस् ।
पानीको शक्ति र सकारात्मकता